Gị Tiwara Etiwa iPhone rụkwaa Nhọrọ N'okpuru:
Nhọrọ 1: N'okpuru akwụkwọ ikike
Mgbe gị iPhone gbajiri, ihe mbụ ị na mkpa ego bụ ma ọ bụrụ gị iPhone bụ ka n'okpuru akwụkwọ ikike, nke pụtara na ị ga-enwe ohere na-esi gị agbajikwa iPhone rụziri for free, ma ọ bụ ọbụna ịgbanwee gaa na ọhụrụ otu maka free. Nke ahụ bụ eziokwu n'ihi na Apple ngwaọrụ ọrụ. Ma ihe dị gị mkpa ịma bụ na mberede mmebi a na-agaghị kpuchie Apple si akwụkwọ ikike, gụnyere mmiri mmiri mebiri. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ a, i kwesịrị ego ndị ọzọ nhọrọ n'okpuru.
Ihe banyere Apple si akwụkwọ ikike ọmụma: http://www.apple.com/legal/warranty/
Nhọrọ 2: ka ojiji nke AppleCare
AppleCare maka iPhone gbatịrị gị mkpuchi afọ abụọ si mbụ zuo ụbọchị gị iPhone na-agbakwụnye na ruo abụọ mere nke mberede mmebi mkpuchi. Ọ bụrụ na ị zụrụ AppleCare n'ihi na gị iPhone na ọ bụ ka n'ime ya ndaba, ị pụrụ ịtụle banyere ya.
Na-eri: $ 99 maka AppleCare (Ị pụrụ nanị ịzụta ya n'ime ụbọchị 30 nke gị iPhone zuo)
Ozi ọzọ ebe a: http://store.apple.com/us/product/S4575LL/A/applecare-for-iphone
Nhọrọ 3: Gaa Apple Genius Bar
Ọ bụghị ịzụta AppleCare n'ihi na gị iPhone? Mgbe ahụ ị na-adịghị ihe ọ bụla mberede mmebi mkpuchi. Ma ọ bụrụ na gị iPhone ka na akwụkwọ ikike oge, ị nwekwara ohere iji nweta ya rụziri for free. N'ihi na a na-adịbeghị anya zụtara iPhone, ị nwere 14 kalenda ụbọchị ebe unu natara iPhone laghachi ma ọ bụ nkwụghachi ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị mmadụ mere mbibi. Ọ bụrụ na ọ bụ nke akwụkwọ ikike, ị ka pụrụ ịtụle akwụ ụgwọ Apple na ịkpụ gị gbajiri iPhone, ma ọ bụ ịhụ ndị ọzọ ụzọ. Agbanyeghị, i nwere ike inwe ụfọdụ bara uru ndụmọdụ si Genius Bar banyere gị agbajikwa iPhone.
Rịba ama: Tupu ị na-aga Apple Genius Bar, i kwesịrị ime ka a ndoputa mbụ.
Ozi ọzọ ebe a: http://www.apple.com/retail/geniusbar/
Nhọrọ 4: iPhone Insurance
Kasị iPhone mkpuchi ekpuchi mberede mebiri. Ọ bụrụ na ị na mgbe zụrụ otu, nwere ike ị chọrọ ego gị na ọrụ inshọransị ịghọta ha atumatu banyere ya. Dabere na mkpuchi gị, i nwere ike mkpa iji kwụọ ụgwọ a idozi ego, ma nke ka nwere ike ịzọpụta gị ukwuu, atụnyere ka ịzụ onye ọhụrụ ma ọ bụ nweta ya rụziri na gị onwe gị.
Cheta na: Ihe ọ sọrọ gị insurer si adịchaghị eme na-na nwere izu nke ichere ihe.
Nhọrọ 5: Get Obodo Store ịrụzi Your Tiwara Etiwa iPhone
Ọ bụ ezigbo oké ọnụ idozi a gbajiri iPhone na Apple mgbe ọ bụ nke gị akwụkwọ ikike. Ọ bụrụ na ị na-achọghị na-emefu ukwuu na ya, ị pụrụ ịgakwuru a Obodo idozi ụlọ ahịa na-enye rụziri. Otu ihe dị mkpa ka ị ntị bụ atọ ọzọ na-akụkụ ndochi. Ọ pụrụ ịbụ ọkara price, ma àgwà dị n'aka. I kwesịrị ime ka a itule.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị nọrọ a di na nwunye nke narị dollar na gị iPhone na ị na-eche ọ bụ ọnụ ahịa gwara ya, m ga-ikwu na ị na-eme ya na ukara Apple edochi anya, kama nke usụhọde akụkụ.
Ọ bụrụ na ị enweghị echiche banyere achọta a Obodo idozi ụlọ ahịa, nke a nwere ike inyere: https://www.icracked.com/